09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 329 Views စာ0မှတ်ချက် 21327 လက်နှိပ်စက်, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Ideas, ဂျိမ်းမေ, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Ideas, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, စတိဗ်ဂင်းနစ်စ်, YouTube ကို
စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy ကမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုဖော်ပြသည် Lego Ideas 21327 လက်နှိပ်စက် လူကြီးပန်ကာဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမနားလည်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည် Lego.
ငါတို့တည်ဆောက်နေတယ် 21327 လက်နှိပ်စက် မှ Ideas ယခုအပတ် Relax With Bricks ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အစပိုင်းတွင်သံသယရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပြသခြင်းထက်ပြသခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုက်ကူးနေစဉ်ဖျော်ဖြေရေးမျက်နှာပြင်တွင်မိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးကိုရောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ ငါဘယ်လောက်မှားသလဲ ၎င်းသည်အကြွင်းမဲ့အောင်ပွဲဖြစ်သည်။
လက်နှိပ်စက်ကို ၁၈၇၄ တွင်တီထွင်ခဲ့သော်လည်းကျယ်ပြန့်စွာဖြစ်လာရန်နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ Touch typing ကိုကျောင်းတွေမှာစတင်သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ တစ်မိနစ်စာလုံးဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကိုယခုကွန်ပျူတာများ၊ လက်ပ်တော့များနှင့်အိုင်ပက်ဒ်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့သော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ကီးဘုတ်အားလုံးဟာမပြောင်းလဲဘဲရှိနေဆဲ (အသစ်စက်စက်အသစ်စက်စက်ဘားအားလုံးကိုပိတ်ထားသည်) နှင့် Bobs) ။
အသက်အရွယ်မကြီးသေးသူများအတွက်သင်လက်နှိပ်စက်ရိုက်နှိပ်သည့်အခါငါတို့အားလုံးဖြတ်သန်းခဲ့ကြရသည့်အရာများ - inky ဖဲကြိုး၊ အက္ခရာများကပ်နေခြင်း၊ Tipp-Ex ကိုယန္တရားထဲမထည့်မိရန်သို့မဟုတ်သင်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့လျှင် လက်နှိပ်စက်ပုတ်စက် (ဂူဂဲလ်၊ သူတို့ဟာအလှအပပါ။ အကောင်းဆုံးတွေကတံဆိပ်တွေနဲ့တူတယ်) စားပွဲခုံရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်မှာသင့်ရဲ့ပွတ်တိုက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ဖို့သတိရနေတယ်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်တစ်ခုလုံးသည်ပကတိအရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသတိမထားမိတဲ့အချက်နှစ်ချက် - သော့ခတ်ထားသည့်ချစ်စရာကောင်းသော clack နှင့်သယ်ရလွယ်ကူသောရထားကိုစက္ကူ၏ဘယ်ဘက်ညာဘက်သို့တွန်းပို့လိုက်ခြင်းသည်မည်သည့်အရာမှပြုလုပ်ထားသည့်အရာတစ်ခုနှင့်ပုံတူကူးယူ။ မရပါ။ Legoဟုတ်လား အမှား!
အဆိုပါ Ideas ကနေအကွာအဝေး Lego သူတို့ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အစုံပါပဲ။ တောက်ပနေတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့အပျော်တမ်းအုတ်ပရိတ်သတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုထုတ်လုပ်မှုမှာမြင်တွေ့ရတာဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ၊ လက်နှိပ်စက်ဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
21327 ၏ဒီဇိုင်နာမှာ Chester မှကျောင်းဆရာ Steve Guinness ဖြစ်သည်။ အချောထုတ်ကုန်သည် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်၎င်းသည်မူလအယူအဆအတိုင်းမှန်ကန်သည်။ သူတို့ဟာစပျစ်သီးနည်းပညာကိုဖြိုခွဲပြီးပေါင်းစပ်လိုက်တယ် Lego တွန်းလှန်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖန်တီးရန်နည်းစနစ်များတည်ဆောက်ခြင်း။
ဂျိမ်းမေလတစ် ဦး Lego အစုံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဒီဇိုင်နာများ, ကနေအဓိကဖြည့်စွက်တ ဦး ကရှင်းပြသည် Lego အဖွဲ့သည်စက္ကူကိုစာရွက်ဖြင့်ကျွေးရန်ခွင့်ပြုသည့်လှည့်ပြားတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် Lego လက်နှိပ်စက်။ ဒါကမသာပေမယ့်သူတို့ကမှင်အရောင်ပြောင်းလဲဖို့လီဗာ, ထုတ်လုပ်သူရဲ့တံဆိပ်, အဓိကလက်နက်သတ္တုကြွေပြားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိရာထွက်ပေါက်နှင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထည်အလိပ်ဖဲကြိုးထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါနည်းနည်းရှက်တတ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရုပ်ရှင်တွေရိုက်တဲ့အခါကလပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ (ရပ်ကွက်ကလာတဲ့သတင်းတွေ) နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအသံထွက်တွေဖတ်ရမယ်၊ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါလှေကားထစ်ကိုလှမ်းပြီးအုတ်ကိုနေရာချမယ်။ ကံကောင်းတာက AFOLWACs (၏အရွယ်ရောက်ပရိသတ်များ Lego Who Are Chums) ကျွန်ုပ်၏ကျောထောက်နောက်ခံရှိပြီးကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိပြီး၎င်းကိုမတွေ့ပါကနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်အားပြောရန်သူတို့ကိုအားကိုးနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာအတူ 21327 လက်နှိပ်စက်, ငါယန္တရား၏ GUTS တက် mucking အလွန်ကြောက်လန့်သောကြောင့်, ငါ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ဆင့်ခေါင်မိုးမှတဆင့်ခဲ့ကြသည်ဖတ်နေသို့မဟုတ်မ, ဒါပေမယ့်ဒီအစုံနှင့်ပတ်သက်။ ငါတကယ်ချစ်သောသူကဘယ်လောက်လိမ္မာပါးနပ်သည်မဟုတ် - ကီးဘုတ်သော့၏အလုပ်ဖြစ်ကြသည် artစာရိုက်သူတစ် ဦး ၏ဆူညံသံကိုသူတို့ပုံတူကူးယူနိုင်ပုံသည်စိတ်ကိုမှောက်မှားစေပြီးနောက်ရထား၏ရွေ့လျားမှုသည်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သည်။ သို့သော် AFOLWACs နှင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်မည်မျှရှိသည်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့လှပတဲ့အရာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းအုတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ပတ်သက်။ အမှန်တကယ်အံ့သြစရာတစ်ခုခုရှိပါသည်။ ငါမဟုတ်တဲ့ငါ့အပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်း၌ငါတက်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ၏ဗီဒီယိုအတိုကိုတင်ခဲ့သည်Lego တွစ်တာအကောင့် - တစ်ခါတလေထူးခြားတဲ့အရာတခုကိုငါတည်ဆောက်ပြီး၊ အရပ်သားတွေကိုဖွင့်ချင်တဲ့အခါငါလုပ်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုဖုံးအုပ်ပေးမယ့်ထည်ကိုမတည်ဆောက်ခင်အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြချင်ခဲ့တယ်။
ငါ၌များစွာသောမက်ဆေ့ခ်ျများရှိခဲ့ပါတယ်, အများအားဖြင့်ဤသူကို bamboozled Lego သူတို့ကသူတို့ကြည့်နေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် AFOL မဟုတ်သူတစ်ယောက်ကလက်နှိပ်စက်တစ်လုံးဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြန်ဖြေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ AFOL ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ build ပါ friends။ ဒါဟာအားလုံးတည်ဆောက်အကြောင်းပါ။
← LEGO Loki အီစတာကြက်ဥအတွက်ကောလဟာလသတင်းများထွက် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား
LEGO ၏အရည်အသွေးမြင့်ပုံများ Star Wars 2021 ထွန်းပြက္ခဒိန်ဖော်ပြခဲ့တယ် →